WMV Metadata Tagger: Tinye, Dezie Metadata ka WMV maka Windows / Mac
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye, Dezie WMV Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
M nwere ọtụtụ narị WMV faịlụ. Olee otú ịkpado metadata ozi, dị ka nduzi, eme ihe nkiri, okwu na-nkọwa nke videos?
Ọ dị mfe tinye metadata ka WMV faịlụ. Isiokwu a ga-akwado gị a ọkachamara WMV metadata tagger. Ọ na-ahapụ gị tinye WMV metadata na dezie WMV metadata. Dị na-agụ site isiokwu Iji nweta ihe ọmụma.
Wondershare Video Converter Ultimate (Video Converter Ultimate for Mac) Kwesịrị na-kasị mma WMV metadata tagger na WMV metadata nchịkọta akụkọ. Ọ na-ahapụ gị mfe tinye metadata ka WMV faịlụ. Na metadata ọmụma, gị iTunes fim ga-mmasị na nkiri cover ma ọ bụ akwụkwọ mmado. Na mgbe ị na pịa gị nkiri na iTunes, ị pụrụ ịhụ mmasị metadata. Ijikwa iTunes nkiri ga-adị mfe. Ọzọkwa, ọ ga-adaba adaba na-egwu nkiri na gị iPhone ma ọ bụ iPad.
Olee otú Tinye Metadata ka WMV
1 mbubata gị WMV faịlụ n'ime ngwa
Ime mbụ download na wụnye software. Na mgbe ahụ, mgbe launching ya, biko ịdọrọ na dobe gị WMV faịlụ n'ime isi interface nke ngwa. Ọzọkwa ị pụrụ pịa "Tinye Files" bulite gị WMV faịlụ. Ọ bụrụ na ị nwere DVD ịgbakwunye metadata, dị nnọọ pịa "Ibu Ibu DVD" n'elu ekpe nke interface.
Biko mara na a ngwa-ahapụ gị mbubata dị ka ọtụtụ videos dị ka omume. Na e nweghị max file size mmachi. Ọzọkwa e nweghị mmachi conversions kwa ụbọchị.
2 Họrọ mmepụta Format n'ihi na gị na Movie
Dị nnọọ pịa ala akụ button n'elu nri nke interface. Wee pịa "Format" ịhọrọ M4V ma ọ bụ MOV. Ma ọ bụ i nwere ike pịa "Ngwaọrụ" ịhọrọ iPhone, iPad, ma ọ bụ Apple TV.
3 Tinye Metadata ka WMV
Biko see a icon na gị dị nkiri. Mgbe ahụ metadata agbakwunye window ga-emeghe. Dị nnọọ pịnye aha gị nkiri, pịa "Chọọnụ", wee pịa "OK". Mgbe a sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ ngwa ka kuputa metadata na-akpaghị aka n'ihi na gị nkiri. Ị pụrụ ịhụ na nwunye aha, omee, director, nkọwa, wdg Mgbe ụfọdụ nwere ike ị chọrọ dezie metadata. Ọrụ a dị iji.
5 Malite ka Play Your Movie on Apple Ngwaọrụ
Mgbe e mere ihe nile, na-azụ isi interface nke a WMV metadata tagger. Wee pịa "tọghata" na-amalite syncing metadata gị nkiri. Ọ dị ya nnọọ na-ewe gị a nkeji ole na ole ịrụcha metadata agbakwunye usoro. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ na gị na iTunes fim na-kwukwara metadata.
Olee otú Tinye, Dezie QuickTime MOV Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú Play MKV na Windows Media Player
Olee otú Download Music si Music Unlimited